Codsashada AI Si Loo Dhiso Nooca Iibsiga ee Dhamaystiran iyo Bixinta Khibradaha Gaarka ah | Martech Zone
Talaado, Janaayo 19, 2021 Talaado, Janaayo 19, 2021 Nate Burke
Ganacsiyadu waxay had iyo jeer raadiyaan siyaabo lagu hagaajiyo waxtarka iyo waxtarka hawlgalkooda labadaba. Tanina waxay unoqon doontaa diirad aad u muhiim ah markaan sii wadno duulista cimilada ganacsi ee cakiran ee kacsan.
Nasiib wanaagse, ecommerce way kobcayaan. Si ka duwan tafaariiqda jirka, taas oo saameyn weyn ku yeelatay xaddidaadaha safka ah, iibka khadka tooska ah ayaa socda.
Inta lagu jiro xilliga ciidaha ee 2020, oo sida caadiga ah ah xilliga ugu dukaamaysiga badan sanad kasta, iibka tooska ah ee Boqortooyada Midowday ee Boqortooyada Midowday wuxuu kor u kacay 44.8% iyadoo ku dhowaad kala badh (47.8%) dhammaan iibka tafaariiqda lagu marayo habka fog.
BRC-KPMG Tafaariiqda Iibinta Monitor
Iyada oo isbeddel dijitaal ah oo joogto ah dusha sare, ama ugu yaraan mid arki doona ganacsiyada qaadanaya hanaan omnichannel ah si looga faa'iideysto labada adduunba midka ugu wanaagsan, inbadan ayaa eegi doonta qaabab loo waafajiyo waxa laga yaabo in ay yihiin dhaqanno aan looga baran ganacsiga cusub ee dijital ah, sida sidoo kale in la yareeyo culeyska shaqada ee weyn.
AI horeyba waxay u siineysaa xalal dhibcahan xanuunka. Iyada oo loo marayo fursadaha xog aruurinta iyo ikhtiyaarrada otomatiga, waxaa jira awood lagu yareeyo howlaha maamulka iyo kheyraadka lumiyo, keydinta ganacsiyada waqtiga iyo lacagta iyo abuurista khibrad macmiil oo ka wanaagsan natiijada.
Laakiin sanadka 2021, waxaa jira kiis in midkan tallaabo hore loo qaado. Hadda oo aan ka warqabno waxtarrada AI oo aan hubsan karno inay halkan tahay in la sii joogo, ganacsatadu waa inay u muuqdaan khatar aad u yar oo ku lug leh qaab isku dhafan.
Adoo adeegsanaya tikniyoolajiyada iyo xogta la heli karo si loo dhiso qaabab iibsi oo wanaagsan, shirkadaha waxay si dhab ah uga faa'iideysan karaan awoodda AI iyo karti ay uga faa'iideystaan.
Fahamka Kafiican Macaamiishaada
AI waxaa loo yaqaanaa awoodeeda uruurinta xogta si loo muujiyo loona saadaaliyo isweydaarsiga macaamilka iyo suuqyada iyadoo loo marayo falanqaynta dabeecadaha wax iibsiga, iyo sidoo kale saameynta ay ku leeyihiin jawiyada yar iyo weyn.
Natiijadu waa sawir guud oo suuqaaga ah oo markaa sii socon kara si loogu wargaliyo go'aamada ganacsiga. Laakiin kolba markay sii socoto, tayada iyo adeegsiga xogta ay awood u leedahay uruurinta iyo falanqaynta waxay ku dhaqaaqday boodbood iyo soohdin.
Maanta, iyo horay u socoshada, xogta iyo fikradaha waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro faham faahfaahsan oo sax ah ee macaamiil kasta, halkii laga dhigi lahaa qeybaha guud ee macaamiisha. Tusaale ahaan, aruurinta iyo aqbalida macluumaadka cookie-ga marka macaamilku booqdo websaydhkaaga, waxaad bilaabi kartaa inaad dhisto astaamahooda, oo ay ku jiraan danaha alaabta iyo dookhyada daalacashada.
Macluumaadkan oo si badbaado leh loogu kaydiyay diiwaankaaga, waad habeyn kartaa waxyaabaha ay ka kooban yihiin markay dib u eegaan bogga si loo abuuro khibrad shaqsiyeed iyo mid wanaagsan. Hadana hadii lagugu heshiiyo siyaasadaada, xitaa waad u adeegsan kartaa macluumaadkan si aad ugu habeysid xayeysiiska iyo isgaarsiinta bartilmaameedka ah.
Hadda, waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku saabsan anshaxa dhaqankan. In kasta oo, adkaynta xeerarka iyo tallaabooyinka u hoggaansamida, xakamaynta xog ururinta ay ku sii jirto gacanta macaamiisha. Kuwa aqbalaya, waa masuuliyada tafaariiqda, iyo danahooda ugu wanaagsan, inay si macquul ah ugu adeegsadaan.
Caadi ahaan, macaamilku wuxuu rabi doonaa doorbidooda daalacashada si loo xasuusto. Waxay ka dhigeysaa khibrad adeegsi oo aad u habboon waxayna ka ilaalisaa iyaga waqtiga dib-u-dejinta iyo dib-u-shaandheynta xulashooyinka. Dhab ahaan:
90% macaamiisha ayaa diyaar u ah inay la wadaagaan macluumaadka dabeecadda shaqsiyadeed magacyada khibrad fudud. Marka, summad awood u leh inay tan sameyso ayaa si fiican loo eegi doonaa, dhiirigelinta dib u eegista iyo soo noqoshada soo iibsiga.
Forrester iyo RetailMeNot
Waxa aysan rabin, si kastaba ha noqotee, waa in magacyadu ay ku xadgudbaan aqoonta ay hayaan iyaga oo ku marinaya iyaga isgaarsiin aan dhammaad lahayn iyo xayeysiis dib loo qorsheeyay. Xaqiiqdii, kuwani waxay run ahaantii dhaawici karaan sumcadda sumcadda, halkii ay ka siin lahaayeen wax kasta oo wanaagsan.
Laakiin xogta aad soo ururiso ayaa kaa caawin kara inaad saadaaliso taas sidoo kale. Waxaad daaha ka qaadi kartaa nooca xayeysiiska ah ee sida ugu fiican uga jawaaba macmiil kasta, oo xitaa si faahfaahsan waqtiga looga jawaabey, qaab noocee ah, qalab ama kanaal, intee in le'eg, iyo inay run ahaantii dhiirrigelisay guji ama beddelaad
Macluumaadkani waa mid qiimo badan u leh dhismaha qaababka iibsashada. Iyada oo ay tahay, waxaad ku abuuri kartaa ololeyaal wax ku ool ah iyo wax bixinno maadaama aad siineyso macaamiishaada sida saxda ah waxa ay doonayaan.
Waagii hore, astaamaha shakhsiyadeed waxay u egtahay in si wada jir ah loogu uruuriyo qaybo isku mid ah, awoodaha otomatiga ee nidaamyada isku dhafan ee AI waxay ka dhigan tahay in macaamil kasta oo shaqsi ah la siin karo khibrad shaqsiyeed iyo mid ku habboon.
Guusha iyo natiijooyinka iibku iyaga ayaaba iska hadlaya. Waxyaabaha shakhsi ahaaneed ayaa horeyba u helay heerar kaqeybqaadasho ka wanaagsan kuwa kale ee guud:
Emailada shaqsiyadeed waxay gaari karaan illaa 55% kororka sicirka furan.
91% macaamiisha ayaa u badan inay wax ka iibsadaan noocyo bixiya talooyin iyo talooyin la xiriira.
Sahaminta Garaaca Wadnaha
Hadda, kaliya ka fikir sida ugu guulaha badan hawlahani ay noqon karaan haddii aan beegsanno tallaabo dheeraad ah oo aan ku wargalinno go'aannadeenna macluumaadka aan ku soo uruurinnay horumarka AI, si loo abuuro qaab-iibsi faahfaahsan oo sax ah.
Shakhsiyan, waxaan aaminsanahay inay tahay fursad aan seegi karin.
Tags: aisirdoonka macmaliibsashada shaqsiCOVID-19ecommerce qofkaforresterxilliga fasaxaiibsashada internetka ee qofkaka dibtafaariiqdauk iibinta internetka
Nate Burke wuxuu aasaasay Diginius sanadkii 2011. Waxaa loo yaqaan horyaal ganacsi e-ganacsi hore iyo ganacsade. Wuxuu bilaabay ganacsigiisii ​​ugu horreeyay ee internetka sanadkii 1997 waana labo jeer oo loo magacaabay Ernst & Dhallinyarada Hal-abuurka Sanadka. Wuxuu haystaa BA cilmiga kombuyuutarka iyo MBA oo uu ka qaatay Jaamacadda Alabama.